ENWUNYEGHỊ ỌKỤ NA LAPTỌỌPỤ WINDOWS 10 - WINDOWS - 2019
Nsogbu nsogbu na nzere na Windows 10
Ọ na - eme na mgbe ịbịara sistemụ arụmọrụ na - ewe ogologo oge ịmalite ma ọ bụ na ọghị amalite ngwa ngwa dị ka onye ọrụ ga - achọ. N'ihi ya, oge dị oké ọnụ ahịa furu efu maka ya. N'isiokwu a, anyị ga-akọwa ụzọ dịgasị iche iche iji mee ka ọsọ nke launching sistemụ arụmọrụ na Windows 7.
Ụzọ iji mee ngwa ngwa
Ọ ga-ekwe omume ịgbatị ngwa ngwa nke os, ma site n'enyemaka nke ndị ọrụ pụrụ iche na iji ngwaọrụ ndị e wuru ewu nke usoro ahụ. Ụzọ mbụ nke ụzọ dị mfe ma bụrụ nke kachasị mma, nke mbụ, ọ bụghị ndị ọkachamara ahụmahụ. Ihe nke abuo kwesiri ndi ozo ndi na-achota ihe ha gbanwere na komputa.
Usoro 1: Windows SDK
Otu n'ime ụlọ ọrụ ndị a pụrụ iche nke nwere ike ime ngwa ngwa nke sistemụ arụmọrụ bụ mmepe Microsoft Windows SDK. Dị ka o kwesịrị ịdị, ọ ka mma iji ngwaọrụ ndị dị otú ahụ sitere na onye mmepụta ihe n'onwe ya, karịa ịtụkwasị ndị na-emepụta ndị ọzọ obi.
Mgbe ị budatara faịlụ nwụnye Windows SDK, gbanye ya. Ọ bụrụ na ị nweghị mpaghara pụrụ iche arụnyere na nke dị mkpa maka ọrụ nke ọrụ a, onye nkwụnye ga-enye gị iji wụnye ya. Pịa "OK" ịga na nwụnye.
Mgbe ahụ, ihuenyo nnabata Windows na-emepe. Ihe ntinye na ntinye nke njirimara bu English, ya mere anyị ga-agwa gị n'ụzọ zuru ezu banyere usoro nrụnye. Na windo a ị dị mkpa ka ị pịa "Na-esote".
Nkwekọrịta nkwekọrịta ikike ahụ gosipụtara. Iji kwenye na ya, tọọ bọtịnụ redio ka ịgbanwuo. "M Kwere" ma pịa "Na-esote".
Mgbe ahụ, a ga-ajụ gị ka ị kọwaa ụzọ na diski ike ebe ngwugwu ngwugwu ga-arụnyere. Ọ bụrụ na ịnweghị ezigbo mkpa maka nke a, mgbe ahụ, ọ ka mma ịghara ịgbanwe ntọala ndị a, mana pịa ya "Na-esote".
Ihe ọzọ ga-emepe ndepụta nke ọrụ dị iche iche ka arụnyere. Ị nwere ike ịhọrọ ndị ị hụrụ na ọ dị mma, ebe enwere uru bara uru site n'iji nke ọ bụla mee ihe. Ma iji mezuo mgbaru ọsọ anyị kpọmkwem, nanị ị ga-achọ ịwụnye Windows Toolkit. Ya mere, anyị na-ewepu akọrọ site na isi ihe ndị ọzọ na-ahapụ naanị ihu "Ngwaọrụ arụmọrụ Windows". Mgbe ị na-ahọpụta ọrụ ahụ, pịa "Na-esote".
Mgbe nke a gasịrị, ozi ga-emepe, nke na-ekwu na emetụlarị akụkụ niile dị mkpa ma ị nwere ike ugbu a ibudata ọrụ ahụ site na weebụsaịtị Microsoft. Pịa ala "Na-esote".
Mgbe ahụ, amalite usoro nke ịde na ntinye. N'oge usoro a, onye ọrụ adịghị mkpa itinye aka.
Mgbe usoro ahụ gasịchara, windo pụrụ iche ga-emeghe, na-akpọ ọkwa mmezu ya. Nke a kwesịrị igosi ihe ederede ahụ "Echichi zuru ezu". Debe igbe dị n'akụkụ ihe odide ahụ "Lelee ihe ndekọ Windows SDK". Mgbe nke ahụ ị nwere ike pịa "Emecha". Ejiri arụmọrụ nke anyị chọrọ.
Ugbu a, ozugbo iji jiri Toolkit Windows Performance iji mee ka ọsọ ọsọ os, rụọ ọrụ ahụ Gbaa ọsọsite na ịpị Nweta + R. Tinye:
xbootmgr -trace buut -prepSystem
Pịa ala "OK".
Mgbe nke ahụ gasịrị, ozi maka ịmalitegharịa kọmputa ga-apụta. N'ozuzu, maka oge dum nke usoro ahụ, PC ga-ebigharị ugboro isii. Iji chekwaa oge ma ghara ichere oge ka ọ gwụchaa, mgbe ọ bụla na-agbanyeghachi na igbe na-egosi, pịa "Emecha". N'ihi ya, nyochaa ga-eme ozugbo, ọ bụghị mgbe njedebe nke akụkọ oge.
Mgbe nke ikpeazụ laghachiri, ọsọ ọsọ nke PC kwesịrị ịbawanye.
Nzọụkwụ 2: Wepụ usoro mmemme ndị ọcha
Ihe na-ezighi ezi, mgbakwunye nke mmemme na-emetụta ya. Ọtụtụ mgbe, nke a na-eme n'oge usoro nhazi nke mmemme ndị a, mgbe nke ahụ gasịrị, ha na-amalite ozugbo mgbe ebudatara kọmputa ahụ, si otú ahụ na-amụba oge ya. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbatị bọtịnụ PC ahụ, ị ​​ga-ewepụ ikikere ngwa ndị ahụ nke njirimara a adịghị mkpa maka onye ọrụ ahụ. A sị ka e kwuwe, mgbe ụfọdụ, ọbụna ngwa ndị ị na-ejighị iji ọnwa eme ihe edebanye aha na ya.
Gbaa shea Gbaa ọsọsite na ịpị Nweta + R. Tinye iwu:
Pịa ala Tinye ma ọ bụ "OK".
Akara ngosi nke njikwa nhazi usoro gosipụtara. Gaa na ngalaba ya "Mmalite".
A na-emepe ndepụta nke ngwa ndị edebara aha na ntinye aka nke Windows site na ndekọ ahụ. Ọzọkwa, ọ na-egosi otú software nke na-arụ ọrụ ugbu a na usoro ahụ, na nke mbụ gbakwunyere na arụmọrụ, ma wepụ ya. Ngwakọta mmemme nke mbụ dị iche na nke abụọ na a na-edozi akara akara n'ihu aha ha. Jiri nlezianya nyochaa ndepụta ahụ ma kpebie ma ọ bụrụ na e nwere ihe omume dị otú ahụ nke ị nwere ike ime na-enweghị nbudata. Ọ bụrụ na ịchọta ngwa ndị dị otú ahụ, wepuchi igbe nlele ndị dị na ha. Ugbu a pịa "Tinye" ma "OK".
Mgbe nke ahụ gasịrị, maka ngbanwe ahụ iji rụ ọrụ, ịkwesịrị ịmalitegharịa kọmputa ahụ. Ugbu a, usoro ahụ kwesịrị ịmalite ngwa ngwa. Kedu ihe omume ndị a ga-adabere na ọtụtụ ngwa ị na-ewepụ site na ikike dị otú a, na otu "ngwa arọ" ndị a bụ.
Ma mmemme na autorun nwere ike ịgbakwunye ọ bụghị naanị site na ndekọ ahụ, kamakwa site na ịmepụta mkpirisi na nchekwa "Mmalite". Site na nhọrọ nke omume site na nhazi usoro, nke a kọwara n'elu, a gaghị ewepu ngwanrọ dị otú ahụ n'aka ikike. Mgbe ahụ, ị ​​ga-eji ụdị algorithm dị iche.
Pịa "Malite" ma họrọ "Mmemme niile".
Chọta ndekọ na listi. "Mmalite". Pịa ya.
Ndepụta ngwa ndị agbakwunyere na ikikere na ụzọ dị n'elu ga-emeghe. Ọ bụrụ na ịchọta ngwanrọ dị otú ahụ na ịchọghị agba ọsọ na-akpaghị aka na os, wee pịa nri na ụzọ mkpirisi ya. Na listi, họrọ "Hichapụ".
Window ga-apụta ebe ịkwesịrị iji gosi mkpebi gị iji wepu ụzọ mkpirisi site na ịpị "Ee".
N'otu aka ahụ, ịnwere ike ihichapụ ụzọ mkpirisi ndị ọzọ na-enweghị isi na folda ahụ. "Mmalite". Ugbu a, Windows 7 kwesịrị ịmalite ịgba ọsọ ngwa ngwa.
Ihe nkuzi: Otu esi gbanyụọ akwụkwọ ikike na Windows 7
Usoro 3: Gbanyụọ ọrụ autostart
Ọ bụghị obere, ma eleghị anya ọbụna karịa, mee ngwa ngwa ịmalite usoro ahụ site na ọrụ dị iche iche, nke na-amalite na mmalite nke kọmputa ahụ. N'otu aka ahụ, otu ụzọ anyị si mee ya na ngwanrọ, iji mee ngwa osote OS, ịchọrọ ịchọta ọrụ ndị na-abaghị uru ma ọ bụ na-abaghị uru maka ọrụ ndị ahụ onye ọrụ na-arụ na kọmputa gị ma gbanyụọ ha.
Iji gaa Ogwe Njikwa Ọrụ, pịa "Malite". Wee pịa "Ogwe njikwa".
Na windo na-egosi, pịa "System na Nchebe".
Ọzọ, gaa "Nchịkwa".
Na ndepụta nke ọrụ ndị dị na ngalaba ahụ "Nchịkwa"chọta aha "Ọrụ". Pịa ya ka ị kwaga Onye nlekọta ọrụ.
Na Onye nlekọta ọrụ Ị nwere ike ịbanye ebe ahụ n'ụzọ dị mfe karị, ma maka nke a, ị ga-echetara otu iwu na nchikota nke "igodo ọkụ". Pịnye na keyboard Nweta + R, si otú ahụ malite windo Gbaa ọsọ. Tinye okwu:
Pịa Tinye ma ọ bụ "OK".
N'agbanyeghị ma ị mere site na "Ogwe njikwa" ma ọ bụ ngwá ọrụ Gbaa ọsọwindow ga-amalite "Ọrụ"nke bụ ndepụta nke ọrụ ndị na-agba ọsọ na ndị nwere nkwarụ na kọmputa a. Na-emegide aha ọrụ ndị na-agba ọsọ n'ọhịa "Ọnọdụ" dozie "Ọrụ". Na-emegide aha ndị na-agba ọsọ na usoro ahụ n'ọhịa Ụdị mmalite bara uru "Akpaaka". Jiri nlezianya gụọ ndepụta a ma chọpụta ọrụ ndị na-amalite na akpaghị aka adịghị gị mkpa.
Mgbe nke ahụ gasịrị, iji nweta aha nke otu ọrụ ahọpụtara, iji gbanyụọ ya, pịa bọtịnụ aka òké aka ekpe aha ya.
Mmiri ụlọ ọrụ ahụ malitere. Nke a bụ ebe ịchọrọ ịmegharị iji gbanyụọ ikike. Pịa n'ubi "Ụdị mmalite", nke bara uru ugbu a "Akpaaka".
Site na ndepụta nke meghere, họrọ nhọrọ "Nkwarụ".
Wee pịa bọtịnụ ahụ "Tinye" ma "OK".
Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-emechi window windo ahụ. Ugbu a na Onye nlekọta ọrụ na-emegide aha ọrụ nke e mere mgbanwe, n'ọhịa Ụdị mmalite ga-adaba uru "Nkwarụ". Ugbu a mgbe ị na-amalite Windows 7, ọrụ a agaghị amalite, nke ga-agba ọsọ ọsọ ọsọ.
Ma ekwesiri ikwu na ọ bụrụ na ị maghị ọrụ otu ọrụ nwere maọbụ na ị maghị ihe ga-esi na njedebe ya pụta, mgbe ahụ ọ siri ike adịghị atụ aro ka ịzie ya. Nke a nwere ike ime ka nsogbu dị oke na PC.
N'otu oge ahụ, ị ​​nwere ike ịmatakwu ihe ndị nkuzi ahụ, nke na-akọwa ọrụ ndị a ga-agbanyụ.
Ihe ọmụmụ: Ịkwụsị ọrụ na Windows 7
Usoro 4: nhichapu usoro
Ịgbalite ngwa ngwa nke OS na-enyere aka dozie usoro sitere "mkpofu". Nke mbụ, ọ pụtara ịhapụ faịlụ diski site na faịlụ oge na ihichapụ ndenye na-ezighị ezi na ndekọ ụlọ ọrụ. Ị nwere ike ime nke a ma ọ bụ aka, ikpochapụ faịlụ faịlụ nwa oge na ihichapụ ndenye n'ime nchịkwa edetu, ma ọ bụ iji ngwaọrụ ndị ọkachamara pụrụ iche. Otu n'ime usoro kachasị mma na ntụziaka a bụ CCleaner.
Nkọwa maka esi ehichapụ Windows 7 site na mkpofu, akọwapụtara na isiokwu dị iche.
Ihe nkuzi: Otu esi ehichapu diski diski na Windows 7
Usoro 5: Na-eji niile cores processor
Na PC na multi-core processor, ị nwere ike ịmalite usoro nke ịmalite kọmputa site na jikọọ niile processor cores na usoro a. Nke bụ eziokwu bụ na site na ndabara mgbe ị na-ejikọta os naanị otu isi gụnyere, ọbụna n'okwu gbasara iji kọmputa dị iche iche.
Mwepụta window windo nhazi. Etulewo ụzọ esi mee nke a na mbụ. Bugharịa na taabụ "Download".
Gaa na ngalaba a kapịrị ọnụ, pịa bọtịnụ ahụ. "Nhọrọ Di elu ...".
A na-emeghe windo ndị ọzọ. Lelee igbe dị n'akụkụ ihe ahụ "Ọnụ ọgụgụ nke ndị nhazi". Mgbe nke a gasịrị, ubi dị n'okpuru ga-arụ ọrụ. Site na ndetu ndepụta, họrọ ọnụ ọgụgụ kachasị elu. Ọ ga-abụ nhata ọnụ ọgụgụ cores processor. Wee pịa "OK".
Ọzọ, Malitegharịa ekwentị ahụ. Na-agba ọsọ Windows 7 kwesịrị ime ugbu a ngwa ngwa, n'ihi na n'oge ya, a ga-eji kọntaktị processor.
Usoro 6: BIOS Setup
Ị nwere ike ịmalite os osị ọrụ site na ịtọlite ​​BIOS. Eziokwu bụ na mgbe mgbe, BIOS na-ebu ụzọ nyochaa ikike ịkwalite site na diski ma ọ bụ USB-drive, si otú ahụ na-etinye oge na ya oge ọ bụla. Nke a dị mkpa mgbe ịtinye usoro ahụ. Ma, ị ghaghị ịnakwere na ịtinye usoro ahụ abụghị usoro dị otú ahụ. Ya mere, iji mee ngwa ngwa na Windows 7, ọ bụ ihe ezi uche ịkagbu ule nyocha nke ohere ịmalite site na diski ma ọ bụ USB-drive.
Gaa na BIOS kọmputa. Iji mee nke a, mgbe ị na-ebu ya, pịa igodo ahụ F10, F2 ma ọ bụ Del. Enwere nhọrọ ndị ọzọ. Igodo a kapịrị ọnụ na-adabere na onye nrụpụta nneboard. Otú ọ dị, dị ka a na-achị, egosiputa igodo nke ịbanye BIOS na-egosi na ihuenyo n'oge bọtịnụ PC.
Ihe omume ọzọ, mgbe ịbanye na BIOS, ọ gaghị ekwe omume ịkọchasị nkọwa, ebe ọ bụ na ndị nrụpụta dị iche iche na-eji interface dị iche. Otú ọ dị, anyị na-akọwa izugbe algorithm nke omume. Ịkwesịrị ịga na ngalaba ebe a na-edozi usoro nke ịdebe usoro sitere na ndị dị iche iche. A na-akpọ ngalaba a na ọtụtụ nsụgharị BIOS "Bọọ" ("Download"). Na mpaghara a, dozie ebe mbụ ịkwalite si diski ike. Maka nke a, a na-ejikarị ihe ahụ eme ihe. "1ST Boot Priority"ebe ịtọba uru ahụ "Mgbagha mbanye".
Mgbe i chebechara ntọala BIOS, kọmputa ga-agbanye ọsọsọ na draịvụ ike na nyocha nke sistemụ arụmọrụ na, mgbe ọ chọtara ya n'ebe ahụ, ọ gaghị ajụ ajụjụ ndị ọzọ, nke ga-ewepụta oge na mmalite.
Usoro 7: Ngwongwo nweta ihe
I nwekwara ike iwelie ọsọ ọsọ ọsọ nke Windows 7 site na ịkwalite ngwaike ngwanrọ. Ọtụtụ mgbe, oge nkedo na nchịkọta nwere ike ime site na ngwa ngwa nke disk diski. N'okwu a, ọ bụ ihe ezi uche iji dochie diski diski ike (HDD) na okwu ngwa ngwa. Ma nke kachasị mma, dochie HDD na SSD, nke na-arụ ọrụ ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma, nke ga-ebelata belata os nke oge. N'eziokwu, SSD nwere ihe ndọghachi azụ: ọnụahịa dị elu na ọnụ ọgụgụ dị nta nke arụ ọrụ ederede. Ya mere, onye ọrụ ahụ aghaghị ịtụle ọganihu na nkwekọrịta niile.
Hụkwa: Otu esi ebufee usoro si HDD ka SSD
Ị nwekwara ike ịwụsọ buut nke Windows 7 site n'ịba ụba nke RAM. Enwere ike ime nke a site na ịzụta ihe RAM karịa ka ọ dị ugbu a na PC, ma ọ bụ site na itinye mgbakwunye ọzọ.
E nwere ọtụtụ ụzọ dị iche iche na-eme ka mwepụta nke kọmputa na-agba Windows 7. Ha niile na-emetụta akụkụ dị iche iche nke usoro ahụ, ma ngwanrọ na ngwaike. N'otu oge ahụ iji mezuo ihe mgbaru ọsọ ahụ, ịnwere ike iji ma ngwaọrụ arụmọrụ na usoro mmemme nke atọ. Ụzọ kachasị mfe iji dozie ọrụ ahụ bụ ịgbanwe ihe ngwanrọ nke kọmputa. Enwere ike ị nweta mmetụta kasịnụ site n'ịjikọta ihe niile a kọwara n'elu ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ iji ụfọdụ n'ime ha n'otu oge dozie nsogbu ahụ.